Qeqesha ngaphandle ngalezi zivivinyo ze-TRX esiziphakamisayo | Bezzia
USusana godoy | 13/07/2021 16:00 | Ukuzivocavoca
Siza ehlobo, kuleso sifiso sokukwazi ukuhamba, ukuya olwandle noma echibini kodwa futhi nokuziqeqesha. Ngoba lapho sinomkhuba, kunzima ukuwuyeka. Uma futhi kuwumkhuba onempilo, ngakho-ke akufanele neze siwuyeke uhambe. Ngakho-ke, manje ungasizakala ngesimo sezulu esihle futhi Qeqesha ngaphandle ngalezi zivivinyo ze-TRX!
Sishiya ngemuva kokuvalelwa ukuze siphefumule ngokwengeziwe futhi sibe ngcono. Ngakho-ke, ukusebenzisa wonke umzuzu waleyo nkululeko kunambitha kangcono kakhulu. Ngakho-ke, bhala phansi lokhu ukuzivocavoca umzimba ongakwenza futhi ngaphandle nangesiyalo se-TRX osithanda kakhulu. Ungaphuthelwa!
1 Qeqesha ngaphandle ngalezi zivivinyo ze-TRX: The Stride
2 Izikwele zigxume
3 Ukugwedla kufanele ku-TRX
4 Ukucindezela kwesifuba
Qeqesha ngaphandle ngalezi zivivinyo ze-TRX: The Stride
Uma unayo amanye amateyipu we-TRX noma amabhendi usuvele unayo ingxenye yalokho esizokwenza. Vele, ngakolunye uhlangothi, siyayidinga leyo ntando yokuthi kwesinye isikhathi kufanele siyikhuthaze ngaphezu kokudingekayo ukuze ivele. Lokho kusho, kuhlala kuphela ukujabulela umoya omusha, noma cha ngenxa yamazinga okushisa, nokubheja ekutholeni indawo enhle yokuqeqeshwa. Kungaba isihlahla esiqinile noma eminye imishini oyibona ngaphandle. Noma imiphi imibono mihle inqobo nje uma sizihlupha.
Lapho sinendawo, sizokwenzenjalo qala nge-cardio ethile, okungakaze kube buhlungu. Kulokhu, kumayelana negxathu, kepha hhayi noma yini. Esikhundleni salokho, kufanele sibambe izibopho ngezandla zombili bese siguqula imilenze, sishintshe ngayinye yazo. Ngakho-ke kuzofanele siye ukweqa, okuzokwenza kusebenze izingalo kodwa futhi nenhliziyo yethu. Vele, uma ungafuni ukweqa okungaka, mane ugoqe umlenze owodwa bese uwubuyisa, ukuze ubuyele endaweni yokuqala emi. Enye indlela yokuziphatha? Ukuletha umlenze ofanayo emuva naphambili ngaphandle kokuwubeka phansi, njengoba kukhonjisiwe kuvidiyo.
Uma imigwaqo eyisisekelo futhi kunokuhlukahluka okuningi kwayo, ama-squats awasalele emuva kakhulu. Ngakho-ke, futhi sizobamba izibopho ziqine futhi ngezandla zethu, kepha kulokhu, Kuzofanele senze isikwele futhi lapho ukhuphuka ungagxuma, ukubuyisa umfutho futhi wenze isikwele esisha. Ngale ndlela sizobe sisebenzisa ngokugcwele isivivinyo ngasinye. Usuzamile okwamanje?
Ukugwedla kufanele ku-TRX
Njengoba wazi kahle, siwabamba ngokuqinile amabhande futhi sizivumele siwe emuva, kepha njalo nomzimba wethu uqonde. Manje okumele sikwenze ukuzivocavoca ingalo esikudinga kakhulu ukuya phambili, ukugoba izindololwane, ukubuyisa kanye nasemahlombe. Ngoba asihlali siyosebenza imilenze futhi kunjalo ukugwedla kuba yinto eyinhloko kukho konke ukuqeqeshwa okufanele usawoti wayo, ngakho kulokhu wayengeke asale ngemuva. Khumbula ukuthi lapho uletha izinyawo zakho eduze kwehange noma isisekelo semichilo, ukuqeqeshwa kwakho kuzoba kukhulu kakhulu. Ungenza inqubo ehlanganisa yomibili imilenze nezingalo.
Kuphambene nalokho esisanda kukwenza futhi kunjalo, kubuye kufake umfutho owengeziwe. Okungukuthi, kufanele sibambe imichilo ngezandla zethu, kepha sizobafulathela. Nakulokhu siphonsa umzimba phambili futhi kufanele senze ukujiya, lapho izindololwane zenza khona ukuguquguquka kodwa ngaphandle kwamahlombe ashibilika futhi ingemuva lingagobeki kakhulu. Ngakho-ke, khumbula ukuthi okumele sikwenze ukuguquguquka nokwelula izingalo zethu. Ngakho-ke futhi kungenye yezivivinyo ezilungele ukuqeqeshwa ngaphandle ngalezi zivivinyo ze-TRX.
Indlela ephelele ye-athikili: Bezzia » Ezempilo » Ukuzivocavoca » Qeqesha ngaphandle ngalezi zivivinyo ze-TRX
UKristen Stewart uzodlala uLady Di ku 'Spencer'